▷ Ndị na -enye nri azụ kacha mma | Nke azụ
Ọ bụrụ na ị nwere tankị azụ, ị nwere ike na-eche echiche ịzụrụ onye na-enye ihe nri azụ ma si otú a chefuo iji aka gị zụọ ha. Na ngwaọrụ ndị a ị ga - echegbu onwe gị maka ijuju ha nri mgbe ha gwụchara. Ha zuru oke mma ma rụọ ọrụ nke ọma ma zọpụta anyị na nsogbu nke "echefuru m ịzụ azụ." Na nke a, anyị ga-enyocha otu ị ga-esi họrọ onye na-enye nri maka azụ gị dịka mkpa gị na nke bụ ụdị kacha mma dị.
You chọrọ ịmatakwu banyere ndị na-enye nri azụ? Nọgide na-agụ ihe.
1 Ezigbo nri nri nri
1.1 Akpaaka feeder
1.2 Azụ nri na-enye nri
1.3 Kemwepu akpaka feeder
1.4 Kọmpat dispenser
1.5 Manual na akpaka nri dispenser
3 Etu ị ga - esi họrọ igwe nri gị
Ezigbo nri nri nri
TONGXU Nri ...
Zacro Fish Feeder...
Site ugbu a gaa n’ihu, anyị ga-enyocha ụdị nke ọ bụla obodo na-ahụ azụ na-azụkarị na ihe bụ isi njirimara ha.
Ọ bụ trough nwere ezigbo imewe iji nagide ụkpụrụ iru mmiri dị elu na-enweghị nhụjuanya ọ bụla ma ọ bụ mmebi. Ọ na - enye gị ohere ịhazi oke nri ịchọrọ inye azụ na olu nri iji webata ya. Dabere na nhazi nke akwarium, igwe nri a na - akpaghị aka nwere ike ịdabere ma ọ bụ kwụrụ onwe ya. Nwere ike ịhụ ya ebe a.
Nke a na-enye anyị pere mpe mana enwere ike iji ya zụọ azụ anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ole na ole. E nwere ọtụtụ tankị azụ na naanị 4 ma ọ bụ 5 ụdị, yabụ obere onye na-enye ihe ga-eme ka azụ anyị ghara ịtụ ya ụjọ, ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji ozuzo ndị ọzọ nke akwarium mejupụtara ya.
Ọ nwere ezigbo mmecha iji gbochie iru mmiri ka ọ na-egbochi nri n'ime ọnọdụ kachasị mma. Enwere ike imeju akpa ahụ mgbe ọ dị mkpa na-enweghị mkpa ịkwasa ihe nkesa ahụ dum. Site na ntụgharị ọrụ ị nwere ike ịhazi oke nri iji zụọ azụ. Lelee ọnụahịa kacha mma ebe a.
Kemwepu akpaka feeder
N'okwu a, anyị na-ahụ ụdị feeder mbughari iji nwee ike ibufe ya ngwa ngwa ma ọ bụ dị ọcha n'ime ma debe ya mgbe niile. Ọ bụ ezigbo nha iwebata nri zuru oke nwa oge ma chefuo iji aka gị nye azụ azụ. Ihe kachasị agbanwe agbanwe banyere ụdị a bụ na ọ nwere enyo ga-egosi ọkwa nri ị nwere iji mara mgbe ị ga-ejupụta.
Ọ na-enye ohere njikọ ya na mgbapụta ikuku ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya. Ya price bụ nnọọ oké ọnụ.
Akpaaka feeder ...
Igwe nri a na-akpaghị aka na-enye ohere ịhazi oke nri a na-enye azụ na ugboro ole. Can nwere ike ịnye ya nri maka awa 12 ma ọ bụ 24 ọ bụla nke bụ ihe nkịtị. O nwere mpaghara iji chekwaa nri ma mee ka ịgbakwunye na-adị mfe. Nwere ike ịhụ ọmarịcha mma ya ebe a.
Manual na akpaka nri dispenser
DORSION Azụ Nri ...
Na nke a anyị na-ahụ igwe eji arụ ọrụ abụọ. Igwe a na - enye anyị ohere ịzụ azụ anyị dabere na mkpa ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji aka na-azụ azụ ma ọ bụ na anyị kwesịrị ime ya nwa oge, anyị ekwesịghị iwepu ya na akwarium ahụ. Ọ nwere Ntuziaka nri nri iji kwụsị nri nri n'oge ị chọrọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-edobe nri gị n'ọnọdụ zuru oke.
Ọ bụ nnọọ eguzogide mmiri ma o nwere ezigbo ego maka uru ọ na-enye.
Enwere m olileanya na iji ụdị ndị a ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị gị mma.
Azụ kwesịrị inye nri mgbe niile ma na-enweghị nri na-edozi ahụ. Anyi agaghi echefu na ha no ebe anabataghi ebe obibi ha, anyi aghaghi idobe nkasi obi ha nke ukwu ka ndu ha nwere n'ime ugbo azu bu ihe kacha mma. Iji mee nke a, a azụ nri dispenser Ọ bụ kpam kpam nnukwu echiche maka ndị na-echezọ na ndị na-achọghị ile anya na nri azụ na ịbụ ndị ohu.
Site na igwe nri ị nwere ike ịzụ azụ gị n'ụzọ na akpaghị aka. Ha bụ programmable na o nwere ike iju gị anya etu teknụzụ si aga taa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji aka gị zụọ ya iji mee ka mmekọrịta dị ike ma ọ bụ n'ihi na ihe nlele na-arịa ọrịa, ị nwekwara ike ime ya. Maka uru ndị a niile, igwe na-enye nri dị mkpa.
Na mkpokọta, ndị na-ere nri niile bụ ndị batrị AA na-akwado dị ka nke a bụ ụzọ iji hụ na nri. Oriri ndị na-eri nri ndị a pere mpe ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ mgbe ha ga-azụ azụ ahụ. Nke a na-achota na ha ga-eriju afọ mgbe niile ma na-enweghị ụkọ nri. E nwere ụfọdụ ndị na-enye nri ndị mepere emepe nwere ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ dịka mkpu, batrị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nwere njikere iji zụọ azụ nwere oke dị egwu.
Etu ị ga - esi họrọ igwe nri gị
Agbanyeghị, ọtụtụ puku ụdị na arụmọrụ na-apụta na anyị amaghị nke kachasị mma maka anyị. Ihe mbụ ị ga - ele anya mgbe ịzụrụ ngwaọrụ nke ndị a bụ nke ahụ ị nwere ike ịhazi ya ma fanye ya dịka ọ masịrị gị. Ọ bụ igwe mgbere igwe ga-ekwenye na gị ọ bụghị gị. Enwere ụdị dị iche iche nke na-enye gị ohere ịzụ ha otu ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ ọtụtụ. Yabụ họrọ nke azụ gị kacha chọọ, dabere n'ụdị ha nwere n'ime akwarium.
Akụkụ ọzọ nke ị ghaghị iburu n'uche Ọ bụ ihe eji eme ya. Nke a dị mkpa maka iru mmiri nke dị na tank azụ ma ọ bụrụ na edozighi ihe ahụ nke ọma maka ya, ọ ga-emebi oge. A na-eji plastik eme ihe ndị kachasị mma ebe ọ bụ na ha na-anagide iru mmiri nke gburugburu ebe obibi na-enye. Dị ka o kwesịrị, họrọ maka ihe nkesa na-adị ogologo oge o kwere mee.
Nke atọ, ọ dị mkpa ịmata ụdị nke feeder na ị ga-enwe ebe ọ nwere "ịzobe onwe ya" n'etiti ihe ndị ọzọ nke ihe ndozi aquarium ka ọ ghara ịtụ egwu azụ. Ọ bụrụ na azụ ahụ echee nsogbu ọ bụla na-abịakwute onye na-enye ihe, ha agaghị eri ma ọ bụ chee na echedoro ha. Yabụ, ọ dị mma ịhọrọ ụdị na agba nke dabara na ịchọ mma dị na akwarium gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Azụ nri na-enye nri
Mgbe nsogbu ahụ gwụ, m ga-achọ ịmata ụdị ndị kachasị mma nke dịkwa mma biko.Anwere m azụ azụ ụfọdụ, nwoke toro atọ, 3 okenye nwanyị na nwata iri na otu.